Madota aAngela naFrank McCourt | Zvazvino Zvinyorwa
Madota aAngela naFrank McCourt
Alberto Makumbo | | Biography, Type, Mabhuku, Literature, Novela
Kana zvasvika pakunzwisisa mamiriro enhau dzakadai sehurombo, kutamira kune dzimwe nyika kana chishuwo chekuvandudza, zvinyorwa zvinova nzvimbo yekutizira yakanakisa yekutendeukira. Kunyangwe tikachera zvakadzama zvishoma, isu tichawana bhuku rakagadzirirwa kuve yechinyakare yechinyakare. Yakanyorwa na Frank McCourt uye yakaburitswa muna 1996, Angela madota haisi imwe chete ye mabhuku akanakisa ezana ramakore rechimakumi maviri ekupedzisira, asi iyo tikiti yakanakisa yekuenda kuIreland izere nehope uye zvipikirwa zvisina kuzadzikiswa.
1 Zvinyorwa zveAngela's Ashes
3 Angela madota: X-ray yenguva
Zvinyorwa zveAngela's Ashes
Vanogona kunge vari varombo, shangu dzavo dzinogona kunge dzakatsemuka, asi uropi hwavo dzimba dzehumambo.
Kubva pane hupenyu hwemunyori iye pachake, Frank McCourt, Angela's Ashes anotiendesa kunzvimbo yeNew York yeBrooklyn uko munyori akapedza hudiki hwake mukutanga kwema 30. Mwanakomana waMalachy naAngela McCourt, Frank aive wedangwe pavakoma vashanu: Malachy Jr., mapatya Oliver naEugene uye Margaret mudiki, avo mushure mekufa kwemazuva mashoma vakamanikidza mhuri kuti idzokere kune yavo yekuIreland. Ikoko, mapatya maviri anofawo uye Michael naAlphie vanozvarwa.
Pfungwa yaAngela's Ashes inova sumo yakanakisa kana zvasvika pakunyudza muverengi mune grey Ireland. Kunyanya zvakanyanya mu guta muLimerick iro rakanga rakazara muhurombo muma30 nema40, iyo mvura yakaita kuti zvese zviwedzere kuodza moyo uye zvimwe zvishuwo zvakaoma kwazvo kuzadzisa, kunyanya kana baba vako vachishandisa mari yese kubva kubasa ravo rekutanga pamapendi uye amai vako vachirambwa nevapristi vanogadzira zvasara pakati pevavakidzani.
Mamiriro ezvinhu anotarisana naFrank, murume wechidiki uyo kunyangwe akakurira mumba mudiki, akazununguswa nekunhuhwirira kweweti, kudonha uye mbichana, anokwanisa kushanduka kunyangwe achirwara uye nekusagadzikana, achidzingirira kurota kwekudzokera kuNew York kuzove munyori.
Ivo vanonyanya kutaurwa mumutambo, zvichibva pahupenyu hwemunyori, ndeavo vemhuri yeMcCourt. Kune rimwe divi, vamwe vagari vemuLimerick vanotorawo kukosha kukuru pabasa rese:
Frank McCourt: Protagonist wenyaya, munyori weThe Ashes of Angelas anotinyudza kuburikidza neyekuyeuchidza iye muIreland yakasviba izere nehope dzakaputsika. Hunhu uyo ​​kunyangwe nedambudziko anoteedzera kurota kwekutiza Limerick achiisa muenzaniso kumhuri yakashatiswa nehunhu hwababa vasina hanya avo, zvirinani, vaiziva nzira yekumuudza nyaya dzakanaka.
Angela: Amai vaFrank vakanaka, asi vasina simba. Nekuzviremekedza kwakaderera, Angela anorambwa nemhuri yake, achitizira kumurume asingazive kumukoshesa, mutsitsi dzevapristi uye kunyangwe hupfambi. Kunyangwe iwo musoro wenyaya yekutanga iyi uchitaura nezvechiitiko chinoitika muchikamu chechipiri chenyaya, Zviri, vazhinji vanonongedza zita rekuti Angela's Ashes sekureva fodya yakadyiwa naMai McCourt vachimirira murume wavo akadzoka nemari kana kunyange nerufu rwevana vavo vatatu.
Maraki: Chidhakwa uye chinokonzeresa nhamo dzese dzeMcCourts, tateguru haangogone chete kuchengetedza basa rakatsiga, asi peni yega yega yaanowana inopedzwa nedoro mumabhawa eLimerick. Ane moyo munyoro, asi asina kusimba, anodyisa kufunga kwemwanakomana wake Frank nekumuudza nyaya kuti anyangarike pakati penhoroondo achitizira kuEngland.
Malachy jr: Mwanakomana wechipiri weMcCourts ndomumwe wevakabatana zvikuru nemukoma wake Frank. Iye anova mubatsiri wake mukuru kana zvasvika pakurera mhuri kuti apedzisire ave musoja senzira yekutiza hurombo.
Kuwedzera kune ava protagonists, pane mavara akakamurwa kuita matatu makuru mapoka:
Vakoma vaFrank naMalachy Jr: Kunyanya Michael naAlphie, vanorarama makore ekutanga ehurombo.
Mhuri yaAngela: Vanun'una vake Delia naPhylomena, hanzvadzi yake Anggie, uyo anobatsira Frank kuvaka ramangwana, murume wake Pa Keating, murume wechitema anokoka Frank kuzotora pint yake yekutanga, amai vake naRamani, sekuru Angela vanotsigira bonde kuti vawane chikafu.
Shamwari dzaFrank: Paddy, Miky, Terry, Freddye naBilly naTheresa. Uye zvakare, zvakakodzera kutaura Theresa Carmody, mukadzi wechidiki anotangisa Frank kuita bonde, kunyange vasina nguva yekutanga nyaya yerudo mushure mekufa kwaTheresa nekuda kwetyphus.
Angela madota: X-ray yenguva
Mamwe akakosha marongero enhau enyaya anoratidzwa.
Madota aAngela nenyaya yaanotaura zvinoshanda semuenzaniso. Kuratidza kuti hapana chinogoneka, kunyanya kana murume wechidiki anobva kumhuri yevarombo yeIreland akawana mari yakakwana yekuenda kuNew York aine makore gumi nemapfumbamwe.
Aya mamiriro, unova iwo mugumo weAngela's Ashes, inoenderera munoverengeka Iri, rakaburitswa muna 1999 uye umo McCourt anotaurira maitiro aakaita munyori. Kuzita iri rinenge richidikanwa kuwedzera Mudzidzisi, rakaburitswa muna 1999 uye mune izvo zviitiko zvake semudzidzisi zvinoratidzwa, uye Angela neMwana Jesu, yakaburitswa muna 2007 uye yakafemerwa nenyaya kubva paudiki hwaamai vake.
Munyori Frank McCourt.
Pulitzer Mubayiro Winner 1997, Madota aAngela angave Yakachinjirwa muchiratidziro muna 1999 nemutungamiri Alan Parker uye nyeredzi Robert Carlyle naEmily Watson mune akasiyana mabasa aMalachy naAngela, achiuya aine akakosha akakosha uye neruzhinji kubudirira.
Nhoroondo inotsvaga mune imwe nguva munhoroondo yezvino kutiudza kuti hapana chinogoneka. Izvo zviroto zvinogona kugara zvichizadzikiswa.
Nekuti kunyangwe hazvo shangu dziri mumatata, pfungwa dzinogona kugamuchira dzimbahwe.
Wakamboverenga here Angela madota naFrank McCourt?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Madota aAngela naFrank McCourt
Literania uye Book Fair. Magwaro maviri akakosha ekunyora muMadrid